Phezulu 10 Izinkomba ze-MT4 Ezisebenzayo (U-downloader mahhala) - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Izinkomba ze-Forex MT4 Phezulu 10 Izinkomba ze-MT4 Ezisebenzayo (U-downloader mahhala)
I-MetaTrader 4 (MT4) iyisiteji sokuhweba esisetshenziswa kakhulu. Abadayisi abathengisa bazo zonke izimakethe zezezimali, ikakhulukazi imakethe ye forex, cabanga nge-MT4 yokuhweba ngenxa yesixhumi esibonakalayo esisebenziseka kalula namathuluzi esiwanikezayo.
Yini izinkomba ze-MT4?
1 Yini izinkomba ze-MT4?
2.1 Ungayisebenzisa kanjani iMACD?
3 2. Inkomba Yamandla Ahlobene (I-RSI)
3.1 Uyisebenzisa kanjani i-RSI?
4 3. Stochastic Momentum Inkomba
4.1 Ungayisebenzisa kanjani inkomba ye-Stochastics?
5.1 Ungayisebenzisa kanjani i-Fibonacci Retracement?
6 5. Amabhendi eBollinger
6.1 Ungawasebenzisa kanjani amaBollinger Bands?
7 6. Inkomba Yokuqondisa Ephakathi (I-ADX)
7.1 Ungayisebenzisa kanjani i-ADX?
8 7. Inkomba Yokugeleza Kwemali (MFI)
8.1 Ungayisebenzisa kanjani i-MFI?
9 8. I-Parabolic SAR
10 9. Isikhombi Somuntu Olenga Isando / Sokulenga
10.1 Ungayisebenzisa kanjani inkomba yendoda yeHammer / Hanging?
11 10. Shintsha Amaphesenti Inkomba
11.1 Ungasisebenzisa kanjani isibonisi se-Change Percentage?
13 I-MetaTrader 4 Ipulatifomu Yokuhweba
14 Imiyalo Yokufaka ye-MT4 Izinkomba
IMT4 yisoftware yokuhlela elula esuselwa kumsebenzisi eyaziwa ngejubane layo eliphakeme lokukhishwa kwezohwebo nokubonakala kwemakethe okuphelele.
It ukuyekethisa of ahlukahlukene izinkomba zobuchwepheshe lowo ngumthombo wokuhamba wokulinganisa ukunyakaza kwemakethe. Noma ngabe usaqala noma ungumhwebi oyingcweti, I-MT4 inikeza izinkomba ezizenzakalelayo nezingokwezifiso zokuhlaziywa kwemakethe okunemininingwane.
I-MT4 yenziwe ngezifiso kakhulu futhi isebenzisa ulimi lokuhlela lwe-MQL4 ukudala izinkomba ezahlukahlukene ze-forex.
Nakhu okuphezulu 10 Izinkomba zeMT4 ezisetshenziswa ngabadayisi abangongoti:
Owokuqala ohlwini yi-MACD noma i-Moving Average Convergence Divergence. I-MACD ikhombisa ukunyakaza kwentengo ngokuhlanganisa izilinganiso ezimbili ezihambayo. Kubhekwa njengenye yezindlela ezihamba phambili ezilandela inkomba futhi isetshenziselwa ukuhweba kwe-intraday kanye ne-swing.
Ungayisebenzisa kanjani iMACD?
I- MACD yakhiwa izilinganiso ezimbili ezihambayo; i-EMA yezinsuku ezingama-26 (umchazi isilinganiso sokuhamba) kanye ne-EMA yezinsuku eziyi-12, futhi isusa i-EMA yezinsuku ezingama-26 kusuka ku-EMA yezinsuku eziyi-12 ukuze ibalwe. I-EMA yezinsuku eziyi-12 iyona esheshayo. Ngaphezu kwalokho, kukhona i-EMA yezinsuku eziyi-9 esebenza njengolayini wesiginali futhi inikeze amasiginali wokuthenga nokuthengisa.
Lapho i-EMA yezinsuku eziyi-12 iwela i-EMA yezinsuku eziyi-9 ivela phezulu, kwenziwa isignali yokuthenga. Ngokwesinye isandla, lapho i-EMA yezinsuku eziyi-12 iwela ngaphansi kwe-EMA yezinsuku eziyi-9, kuyisiginali yokuthengisa.
I-MACD ingasetshenziswa nezinye izinhlobo zokuhlaziywa kobuchwepheshe, njengamaphethini eshadi. Lokhu kwenza inkomba iphumelele ngokwengeziwe.
2. Inkomba Yamandla Ahlobene (I-RSI)
I-RSI iyi-oscillator yomfutho. Ikala isilinganiso sokunyuka kwentengo ebheke phezulu nangaphansi futhi ibala amandla ethrendi ebangeni kusuka kulo 0 uku 100.
Uyisebenzisa kanjani i-RSI?
Uma I-RSI ikhombisa inani elingenhla 70, lesi yisimo sokuthengwa ngokweqile, okusho ukuthi kunengcindezi eqinile yokuthenga, futhi imali yamabili noma impahla ihweba ngaphezu kwezinga layo elijwayelekile. Kulesi simo, udinga ukuthatha izikhundla ezimfushane.
Ngokuvamile, lapho i-RSI ingezansi 30, kuyisimo esithe xaxa futhi sisho ukuthi intengo izobuyela emuva. Izimo ezithengwa kakhulu zingahlala isikhathi eside kusuka ezinyangeni kuye eminyakeni. Ngakho-ke, ngaphambi kokungena ezikhundleni ezimfushane, abadayisi kufanele balinde isiqinisekiso.
Abahwebi bavame ukusebenzisa i-RSI nezinye izindlela zokuhlaziya ezobuchwepheshe ukuqinisekisa amasiginali wokuhweba.
3. Stochastic Momentum Inkomba
Isibonisi se-Stochastic siyingxenye yezinkomba ze-oscillator, njenge-RSI ne-Index Index Yezimpahla (I-CCI).
Ungayisebenzisa kanjani inkomba ye-Stochastics?
Stochastics ukusetshenziswa ezimakethe ezihamba phambili kuhlukile ezimakethe ezisukela.
Emsamo we-MT4, imigqa emibili i-% K ne-% D imele amaStochastics. I-K% inani lamanje le-Stochastics, ngenkathi i-D% isilinganiso esinyakazayo sesikhathi esingu-3% se-K%.
Amafomu ezimpawu lapho i-K% iwela i-D%. Inani lamaStochastics lilele phakathi 0 uku 100. Lapho inkomba ibonisa amanani angenhla 80, yisimo esithengwe ngokweqile. Futhi, lapho amanani engezansi 20, yisimo esithe xaxa.
I-Stochastics ivame ukukhiqiza amasignali wokuguqula, ngakho-ke abathengisi kufanele bayisebenzise ngokubambisana nokunye ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe.
Lesi esinye inkomba ebalulekile esetshenziswa ochwepheshe abaningi. Ikhomba ukusekelwa okungenzeka kanye namazinga okumelana.
Ungayisebenzisa kanjani i-Fibonacci Retracement?
I-Fibonacci Retracement isho ukuthi lapho inani lihamba kakhulu ohlangothini olulodwa, ibuyela ezingeni layo lentengo langaphambilini, bese ibuyela futhi ezingeni layo langempela.
Fibonacci Retracement kubalwa ngokuthatha ukuphakama kwamanani amabili bese kuhlukaniswa lokhu ngama-Fibonacci ratios. Izilinganiso ze-Fibonacci zisuselwa ekulandelaneni kwe-Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 njalo njalo).
Lapho nje lezi zilinganiso sezitholakele, abathengisi bangabona amazinga okusekela nokumelana ngokuhlela imigqa evundlile.
5. Amabhendi eBollinger
Amabhendi eBollinger asebenza ngokufana nokubuyiswa kweFibonacci futhi akhomba amazinga wokusekelwa nawokumelana. Kuyingxenye yezinkomba zokuguquguquka okulinganisa ukuguquguquka kwentengo.
Ungawasebenzisa kanjani amaBollinger Bands?
Amabhande ayanwebeka noma anciphile, kuya ngokushintshashintsha kwemakethe. Bollinger bands sebenzisa imigqa emithathu ukwethula ukuguquguquka. Bangama-SMA (isilinganiso sokuhamba esilula) ngenani le- 20, ibhendi engezansi (ingaphansi kwenani le-SMA), nebhendi engenhla (ngaphezulu kwenani le-SMA).
Uma imakethe iguquguquka kakhulu, amabhande azonweba futhi azoncipha ngokuncipha komoya.
Udinga ukubeka amaphuzu wokungena nokuphuma eduze kwamabhendi aphezulu naphansi. Thengisa izikhundla zithathwa ebhentshini eliphezulu futhi zithenge izikhundla emkhawulweni webhendi ophansi.
6. Inkomba Yokuqondisa Ephakathi (I-ADX)
I-ADX ilinganisa amandla wethrendi yamanje.
Ungayisebenzisa kanjani i-ADX?
Njenge-RSI neStochastics, iyi-oscillator yomfutho futhi isuka ku- 0 uku 100.
Ukufundwa ngezansi 20 ikhombisa ukuthambekela okubuthakathaka, ngenkathi kufundwa ngenhla 50 ikhombisa ukuthambekela okuqinile.
I-ADX ingasetshenziswa futhi njengenkomba yokubuyela emuva. Iyasho ukuthi ukuthambekela kwamanje kunamandla okuguqula ngokuzayo.
7. Inkomba Yokugeleza Kwemali (MFI)
I-MFI iyinkomba yevolumu ethola amazinga wokunikezwa nawokufunwa kwempahla ethile.
Ungayisebenzisa kanjani i-MFI?
Ithola ushintsho lwentengo futhi ikhombisa ivolumu yethikhi kumashadi. Itshela abathengisi ngokutholakala nokuthengwa kwempahla.
Isikhathi esizenzakalelayo se- MFI kuyinto 14 futhi ingashintshwa ngokufanele. I-MFI isukela ku- 0 uku 100. Uma inani lingaphezulu 80, yisimo sokuthengwa ngokweqile, futhi uma inani lingezansi 20, yisimo esithe xaxa.
8. I-Parabolic SAR
I-Parabolic SAR (ima futhi iguqulwe) inquma ukuphela kwethrendi.
Ungayisebenzisa kanjani i-Parabolic SAR?
Isikhombi sikhombisa amachashazi namaphoyinti eshadini ukukhomba ukubuyiselwa emuva kwethrendi. Lapho amachashazi eza ngezansi kwamakhandlela, kuyisiginali evumayo, futhi kufanele ufake ubude.
Ngakolunye uhlangothi, lapho amachashazi eza ngezansi kwamakhandlela, kuyisiginali esingesihle, futhi udinga ukufaka okufushane.
Khumbula lokho I-Parabolic SAR isebenza kahle ezimakethe ezihamba phambili.
9. Isikhombi Somuntu Olenga Isando / Sokulenga
Lezi zinkomba zingamaphethini asuselwa kumakhandlela, ezichaza ukubuyela emuva okungenzeka.
Ungayisebenzisa kanjani inkomba yendoda yeHammer / Hanging?
Indoda elengayo iyiphethini yokubuyela emuva ye-bearish futhi ivela ku-uptrend. Isakhiwo saso siqukethe intambo ephansi ende ngentambo encane noma engenayo nhlobo. Itshela abathengisi ukuthi baphume ezikhundleni zabo ezinde.
Hammer iphethini yokuguqulwa kwamakhandlela e-bullish nokuqina endaweni ephansi. Inesakhiwo esifana nesando esinentambo ende ende nomzimba omncane.
10. Shintsha Amaphesenti Inkomba
Njengoba igama liphakamisa, Isibonisi sephesenti lokushintsha sichaza ukwehla kwamanani ngamaphesenti.
Ungasisebenzisa kanjani isibonisi se-Change Percentage?
Ukuze usebenzise inkomba, udinga ukusetha isikhathi esibekiwe njengosuku nosuku noma ngenyanga. Inkomba izobe ibala ukunyakaza kwentengo ngokuhlaziya okwedlule nedatha yamanje.
Azikho izinkomba 100% olunembile. Ukuhweba ngempumelelo, udinga ukuhlanganisa lezi zinkomba nezinye izinhlobo zokuhlaziywa kobuchwepheshe.
Okuphezulu 10 Izinkomba ze-MT4 zihlinzeka ngethuba lokuthola izici ezahlukahlukene kanye namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Kususelwa kulwazi, abathengisi bangathatha ukunyakaza kwentengo okuqhubekayo futhi balungise isu labo ngokufanele.
Zonke izinkomba ezibalulwe ngenhla zimahhala ukuze uzilande ngaphandle kwezindleko ezengeziwe.
I-MetaTrader 4 Ipulatifomu Yokuhweba
Imakethe yeXM - Yamukela Amaklayenti Omhlaba Wonke (Ngaphandle kwabahlali base-U.S)
IG Market - Yamukela Amaklayenti Omhlaba Wonke (Kubandakanya Izakhamizi zase-U.S)
Ithembekile futhi ilawulwa
Umhlinzeki Wokuhweba We-No.1 we-CFD Womhlaba
Amapulatifomu Asebenziseka kalula
Umhlinzeki we forex omuhle wase USA
Imiyalo Yokufaka ye-MT4 Izinkomba
Landa i-MT4 Indicator (mq4) ifayela.
Kopisha (mq4) fayela ku-Directory yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Sesha "Izinkomba Zokwezifiso" ku-Navigator yakho ikakhulu kwesobunxele ku-Metatrader yakho 4 Iklayenti
Qhafaza kwesokudla kufayela le- (mq4) ifayela
Inkomba yeMT4 izotholakala kuShadi lakho.
Indlela ukususa MT4 Inkomba (mq4) ifayela elivela Ishadi lakho leMetatrader?
Khipha ku-internet Phezulu 10 Izinkomba ze-MT4 (Mahhala)
Isiqephu esedluleIsigamu se-Trend Scalp Forex Trading Strategy
Isihloko esilandelayoIbanga Isisindo EMA MT5 Inkomba
I-Regression Channel ene-Variable Polynomial Degree Indicator ye-MT4
Isikhombi Sombhalo se-VSA se-MT4
Izinkomba ze-Forex MT54289
Amakomidi e-Forex - Septhemba 28, 2021 0